‘फौजीलाई कुन हो दशैं, कुन हो चाड तिहार’ | Makalukhabar.com
हरेक वर्षको दशैं आसपास एउटा गीत बज्छ–
‘वर्षमा दिनको यो बडा दशैं कमेरो लाइएन
देश र जनता भन्दामा भन्दै घर जान पाइएन
धानकै बाला झुलाउँला मायालाई बोलाउँला’
अनि सामाजिक सञ्जालभरी प्रहरीको पोसाक लगाएका, हातमा बन्दुक बोकेका एउटा व्यक्तिको तस्विरसहितको सयौँ ट्रोल छरपस्ट हुन्छन् । ‘यीनी दाजुले यो वर्षको दशैंमा छुट्टी पाएनन् भने म नि भर जान्नँ, मैँले थाहा पाएदेखि आजसम्म यो दाईले दशैंमा छुट्टी पाएका छैनन्, यो दाईले यसपाली बिदा पाउला कि नपाउला’, –यस्तै यस्तै शब्दले भरिपूर्ण हुन्छ त्यो ट्रोलवाला तस्विर ।
ती ट्रोल, तस्विर हेर्दै मुस्कुराउँछन् प्रहरी अधिकृत दीपक कोइराला । आफूलाई नचिने पनि आफ्नो कला चिनिएकोमा मक्ख पर्छन् । दंग पर्छन् उनी ।
जनतालाई उनको दशैं कस्तो होला भन्ने चिन्ता जागिरहँदा २०६० सालतिर पत्रकारिता छोडेर सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ती भएका दीपकलाई ती चाडबाड भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको सुर्ता छ । चिन्ता छ । सबै चाडबाड फौजी घरमै रमाइलो मान्ने उनी जनतालाई कसरी सुरक्षा दिने भन्नेमा केन्द्रित रहँदा यता जनता भने उनको खोजीमा छन् ।
प्रहरी अधिकृत दीपकलाई राम्रोसँग कमैले मात्र चिन्छन् । तर फौजीको पीडालाई शब्दमा उतार्ने उनको कला, शैली तथा प्रस्तुतिलाई बिर्सन पनि सकेका छैनन् कसैले । आखिर को हुन्, को थिए त त्यो ट्रोलमा छाउने फौजी ? के उनी साँच्चै यो दशैंमा घर जान पाउलान् त ? कस्तो हुन्छ त फौजी र फौजी घरको दशैँ ? लगायतका विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी संक्षेपः
चारैतिर दशैंको माहोल छ, तपाईँलाई कत्तिको छुँदैछ ?
दशैं हामी सबै नेपालीको महान चाड हो । म पनि एउटा नेपाली भएको नाताले मलाई यो पर्वले नछुने कुरै भएन । मलाई राज्यले एउटा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्योसँगै मेरो पारिवारिक जिम्मेवारी पनि छ । यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै दशैं मनाउनु पर्छ ।
यो वर्षको दशैंमा घर जाने अवसर जुर्ला जस्तो छ कि छैन ?
घर जाने सम्भावना छैन । किनभने हामी अधिकृतहरुले म घर जान्छु भनेर भन्नु भन्दा पनि आफू बसेर अरुलाई पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफूले घर जान्छु भनेर बिदा पास गर्ने भन्नेतिर ध्यान नै जाँदैन । मनमै आउँदैनन् त्यस्ता कुरा ।
परिवारसँग बसेर दशैं मनाउन नपाउँदा खल्लो लाग्दैन ?
एउटा चेलीलाई विवाह गरेर पराई घर जानु जतिकै कर्तव्य बोध हुँदो रहेछ एउटा फौजीलाई । विवाह गरेर गएकी चेलीले माइती सम्झेर माइतीसँग बसेर दशैं मनाउन पाइनँ भनेर गुनासो गरेर हुन्छ त ? उसले पराइ घरमै रमाउनुपर्छ । त्यहीँ एडजस्ट हुनुपर्छ, जसरी पनि ।
सुरुसुरुमा दुःख लाग्छ । तर पछि एडजस्ट हुँदै जाँदा उनले त्यही घरलाई नै आफ्नो सारा संसार मान्छिन् । हामी फौजीको पनि यस्तै हो । जन्मघर भनेको माइती जस्तो अनि कर्म घर भनेको फौजी घर हुँदो रहेछ । त्यसकारण हामी यहाँ असाध्यै रमाउँछौँ । धुमधामले दशैं मनाउँछौँ ।
यो वर्ष पनि छुट्टी मिलेन भन्नुपर्दा कतिको दुःख लाग्थ्यो ? परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो ?
परिवारबाट त्यस्तो कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन । किनकि उहाँहरुले मेरो कर्तव्य बुझ्नु भएको थियो । मेरो बाध्यता उहाँहरुलाई थाहा थियो । उहाँहरु थाक्नु भइसक्यो । मलाई घर आउनु भन्दा भन्दा उहाँहरु वाक्क हुनु भइसक्यो । बरु हामी नै उहाँ भएकै ठाउँमा जाँदा ठिक होला भनेर यसपाली त परिवार नै काठमाडौंबाट म कार्यरत जिल्ला सिराहा नै आउनु भएको छ । यो वर्षको दशैं परिवारसँगै मनाउँदै छु ।
फौजीमा लागेपछि कति वटा दशैं परिवारसँगै बसेर मनाउनु भयो, याद छ ?
मैँले धेरै दशैं परिवारसँगै बसेर मनाउने अवसर पाएको छु । अहिले ४, ५ वर्ष जति भयो परिवारसँग बसेर दशैं मनाउन पाएको छैन ।
तपाई पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, फौजीतिर कसरी लाग्नुभयो ?
सबै मान्छेको आ–आफ्नै एउटा रहर हुन्छ । मेरो पनि पत्रकारिता तिर लगाव थियो । रहर थियो । त्यसकारण मैँले त्यही विषय अध्ययन गरेँ ।
मेरो बुवा फौजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अहिले नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड हुनु भइसक्यो । मेरा सबै दाजुहरु पनि यतैतिर । त्यसकारण मलाई पनि यो पेसातिर शौख थियो । मोह थियो । मेरो सपना पनि थियो राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने । त्यसैले म यतातिर आकर्षित थिएँ र २०६० सालतिर फौजीतिर लागेँ । अहिले पनि म शसस्त्र प्रहरी सेवामा छु ।
गीत गाउने, लेख्ने अवसर चाहीँ कसरी जुर्यो ?
म पत्रकारिता विषय अध्ययन गरेको मान्छे । शसस्त्र प्रहरी सेवामा गएँ । पत्रकारिता विषय पढेको भएर यता त्यस्तै काम गर्ने ठाउँमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यसपछि कति कथा लेखियो, कति गीत लेखियो, चलचित्र निर्माण गर्दै गइयो ।
तर त्यो मैँले व्यावसायिक रुपमा लेखेको भने होइन । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा दर्शक, श्रोतालाई नयाँ नयाँ सामग्री पस्कने कोशिष गरेको मात्रै हुँ । तीनै गीतहरु अहिलेसम्म पनि चर्चित छन् । निकै खुशी लाग्छ ।
दशैं नजिकिँदै गर्दा तपाईँका गीतहरु भाइरल हुन्छन्, उतिकै बन्छन् ट्रोल । यतिबेला कस्तो महशुस हुने रहेछ एउटा कलाकारलाई ?
जतिबेला मैँले धेरै मिहेनत गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो बारेमा कुनै चर्चा भएन । म भाइरल पनि भइनँ । कुनै ट्रोल पनि बनेन । तर टेलिभिजनहरुमा मेरो बाहेक अरु कुनै गीतहरु बज्दैनथ्यो दशैंको माहोलमा ।
अहिले कलाकारिता छोडेर आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेको लगभग ३–४ वर्ष भयो । म त्यो ठाउँबाट सरुवा भएर अर्को ठाउँमा आइसकेको छु अहिले । ३–४ वर्षको अवधिमा दर्शकहरुले पक्कै पनि मलाई खोज्नुभयो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा मेरो आफ्नै तस्विरमा कसैले के भन्नु भएको हुन्छ, कसैले यो रिटायर्ड भइसक्यो होला, यो हवल्दार साबले यसपाली बिदा पाउँछ कि पाउँदैन होला भन्नुहुन्छ । म एउटा शसस्त्र प्रहरी बलको अधिकृत हुँ तर सबैले मलाई हवल्दार भनेर लेख्नुभएको हुन्छ ट्रोलमा । तर म खुशी छु । किनकी मलाई नचिने पनि मेरो कला र पेसालाई सबैले चिन्नुभएको रहेछ ।
म ती ट्रोलहरु हेरिरहन्छु, मुस्कुराइ रहन्छु, हाँस्छु । मलाई रमाइलो लाग्छ तर म खासै प्रतिक्रिया चाहीँ दिन्नँ । मेरो बारेमा यतिको चासो राखिदिनु हुँदो रहेछ भनेर हर्षित हुन्छु ।
ती चर्चित फौजी गीतहरुमा तपाईँले आफ्नै भोगाइ, पीडा उतार्नु भएको त होइन ?
साहित्य र सिर्जना गर्ने मान्छेले कहिले पनि आफ्नो जीवनको भोगाइबारे मात्रै लेख्छ भन्ने छैन । कला भनेको कल्पना हो । ती गीतहरुमा मेरो पीडा भन्दा पनि म जस्ता मान्छेहरुको अवस्था, पीडा कल्पना गरेर गीतमा उतारेको हुँ ।
कति सुनेका कुरा छन् भने कति देखेका कुरा छन् ती गीतमा । हाम्रो बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमाहरुको कुरा सुन्दा, उहाँहरुको भोगाइ अर्थात् एउटा नेपाली फौजी र उसको परिवारको थेट वास्तविकतालाई मैँले मेरो शब्दमा उतार्ने प्रयास मात्र गरेको हुँ । अब काठमाडौं फर्किएपछि फेरि नयाँ प्रस्तुति, कोशेलीहरु दर्शक तथा शुभचिन्तक माझ लिएर आउने छु । मेरो कला मरेको छैन । जोस जाँगर त्यतिकै छ । त्याे मेरो प्रतिबद्धता नै भयो मेरो प्रशंसकलाई ।
फौजीघरमा फौजीको दशैं कस्तो हुन्छ ?
फौजीको दशैं पनि निकै रमाइलो हुन्छ । कोही घर गएका हुन्छन् । कोही आलोपालो गरी जान्छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैजना आफ्नो फौजीघर छोडेर जान पनि मिल्दैन । हामी जो–जो फौजी घरमा हुन्छौँ, घटस्थापनाको दिनमा मन्दिरमा जमरा राख्छौँ । पूजा आजा गर्छौँ । अनि नवमीको दिनमा बोका काटेर बलि पनि दिन्छौँ । दशैंका बेला एउटा घरमा हुने सम्पूर्ण संस्कारहरु हामी पूरा गर्छौँ ।
त्यस्तै विजया दशमीको दिनमा जमरा र टिका थापिन्छ । फौजी घरको सबैभन्दा ठूला ज्येष्ठ सदस्य, सबैभन्दा सिनियर को छ, उसले सबै जनालाई टिका लगाइदिन्छन् । त्यसपछि नाचगान गरिन्छ । ‘धानकै बाला झुलाउँला’ भन्ने गीतमा जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ हामी फौजीको दशैं ।
घर जान नपाएका साथीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मैँले केही भन्नै पर्दैन । न त सान्त्वना नै दिनुपर्छ । मेरा प्रत्येक शब्दमा सान्त्वना छन् । ‘भन्नेलाई भन्दिए भो बिर्स घरबार, फौजीलाई कुन हो दशैं कुन हो चाड तिहार’, ‘फौजी सबै घर गए देशको रक्षा कसले गर्छ’, यी पनि एउटा पनि सन्देश नै हुन् । त्यसैले फौजी साथी हो, हामी फौजी घरमा रमाउने हो । र दशैँ मनाउने हो ।
बाल्यकालको दशैं कस्तो थियो र जिम्मेवारी थपिएपछिको दशैं कस्तो हुने रहेछ ? थोरै स्मरण गरौँ न ?
बाल्यकाल मेरो दोलखा जिल्लामा बित्यो । मेरो जन्म त्यहीँ भएको हो । दशैंको बेला रोटेपिङ हालिन्थ्यो । लिंगे पिङ हालिन्थ्यो । रुखमा बाबियोको डोरी बाटिन्थ्यो । सबै जना कमेरो लिन बेसी झर्ने भन्थे । बेसी झरेर ल्याएको कमेरो घरमा छ्यापिन्थ्यो । ढिकिमा ड्याङ ड्याङ धान भुटिन्थ्यो । यतापट्टि चिउरा कुटिन्थ्यो । त्यो भुस नै भएको चिउरा खानलाई कति मज्जा आउँथ्यो । भोलिपल्ट लुगा किन्नु छ भनेपछि रातभरि निन्द्रा लाग्दैन थियो । दशैंको नाना, दशैंको खाना र दशैंको गाना यी तीन चिजबाट हामी कहिले चाहीँ भाग्न सकेका छौँ र ?
अहिले त्यो सम्झिँदाखेरी त दशैं आजकाल कहाँ नै आउँछ र ? आजकाल दशैं मान्छेको घर–घरमा होइन, मोबाइलमा आउँछ । सामाजिक सञ्जालहरुमा आउँछ । जिम्मेवारी थपिएपछि हामीले दुनियादारी अनुसार गरेकै गर्नुपर्ने हुन्छ । गरेकै पनि हुन्छौँ । मैँले हिजोको दिनमा बुवा आमासँग नाना माग्थेँ भने अहिले मैँले उहाँहरुलाई नाना दिनुपर्छ । सबै व्यवहारहरु आफैँले निभाउनुपर्ने हुँदा दशैंमा रमाइलो गर्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी टार्ने भन्नेतिर लागिन्छ । त्यति सहज पनि त छैन । थोरै पैसाले त टर्दैन अहिलेको दशैं ।
तपाईँ त बुवाको इच्छा बमोजिम फौजी बन्नुभयो, छोराछोरीलाई चाहीँ के बनाउने सोच्नुभएको छ ?
छोरा मेरा सानो छ । मन्टेश्वरीमा पढ्छ । अब ऊ फौजी हुने बेलासम्म देश, काल, परिस्थिति के–कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार चल्दै जाने हो । जेठी छोरी लगभग २०–२१ वर्षकी भइन् । अहिले फिजियोथेरापीमा डाक्टर पढ्दै छिन् इन्डियामा । अर्की छोरी नौ कक्षामा पढ्छिन् । छोराछोरी यस्तो बनिदिउन्, यस्तो बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने छैन मलाई । उनीहरुलाई जे बन्ने इच्छा छ त्यही बन्छन् । राष्ट्र सेवामा इच्छा देखाउँछन् भने पनि म खुशी नै हुनेछु । प्रोत्साहन दिनेछु ।
दर्शक, शुभचिन्तकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई मन पराएर, मलाई खोजिदिएर मेरो बारेमा ट्रोल बनाएर सामाजिक सञ्जाल पुरै रंगाइदिनु भएकोमा, मेरो बारेमा चिन्ता लिइदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरुको त्यो म प्रतिको माया, सोच म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु ।
यहाँहरुले मलाई खोजिरहनु भएको मलाई ज्ञात छ । राष्ट्र सेवामा लागिरहँदा मेरो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा म केही समय ओझेलिएको मात्र हुँ । म केही समय छायाँमा बसेको मात्र हुँ । म फेरि एउटा सुनौले घाम बनेर मेरा नयाँ नयाँ कृतिहरु लिएर यहाँहरु माझ आउनेछु । त्यतिबेला यहाँहरुले मलाई हेर्न पाउनुहुनेछ । पक्कै पनि म यहाँहरुबाट टाढा जाने छैन ।
कालिकाबाट नगद सहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
प्रहरीको पनि तलब कट्टा
कोभिड १९ : जोन्टाद्वारा मजदुरहरुलाई खाद्यान्न वितरण
चैत्र २६, काठमाडौं । जोन्टा क्लब अफ काडमाडौंले दैनिक ज्याला मजदुरहरुलाई खाद्यान्न प्याकेजहरु वितरण गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को जोखिम बढीरहेको बेला नेपाल सरकाले घोषणा गरेको लकडाउनको संकटको समयमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाईरहेका मजुरहरुलाई जोन्टाले चामल, दाल गेडागुडी, खाने तेल, चिउरा, नुन, चिनी र... जारी राख्नुहोस...
...जाे बिहान नौ बजेदेखि खाना खान कुरेर बस्छन्
चैत्र २६, विराटनगर । ४३ वर्षीय मोहन बिहान नौ बजेदेखि खाना खान कुरेर बस्छन् सडकमा । कुन बेला खाना आँउछ भन्दै बाटो तर्फ हुन्छ उनको आँखा ।उनी सडकमा मागेर नै भोक मेटाउने गर्थे पहिले पनि । सरकारले लकडाउन गरेपछि भने उनको दैनिकी फेरिएको छ । लकडाउनको कयौं दिन त उनी भोकै बसेका थिए ।त्यस्तै अर्का ४३ वर्षीय ते... जारी राख्नुहोस...
कोरोना संक्रमित भेटिएको भन्दै अफवाह फैलाउने एक जना पक्राउ
चैत्र २६, कैलाली । कैलालीमा कोरोना संक्रमित भेटिएको भन्दै स्टाटस लेखेर नागरिकलाई त्रसित बनाएकाे तथा अफवाह फैलाएकाे आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टीकापुर नगरपालिका–१ को ब्लक नम्बर १० मा कोरोना संक्रमित भेटिएको भन्दै स्टाटस लेख्ने टीकापुर नगरपालिका–२ का पवनकुमार भट्टराईलाई पक... जारी राख्नुहोस...
कालोबजारी गर्ने अग्रवाललाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
चैत्र २६, काठमाडौं । कोरोनाको ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवाललाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको छ ।बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अग्रवाललाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर... जारी राख्नुहोस...
लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने २ हजार बढी मानिस कारवाहीमा
फाइल तस्विरचैत्र २६, काठमाडौं । लकडाउन उल्लंघन गर्ने २ हजार बढी मानिसहरुलाई प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलन नदिनका लागि गरेको लकडाउन उल्लंघन गर्ने २ हजार ३ सय १ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । यो बुधबार बिहान ८ बजेसम्मको तथ्यांक हो ।नियन्त्रणमा लिइएका... जारी राख्नुहोस...
जारभित्र लामखुट्टे, विराटनगरकी उपमेयर निस्किइन् अनुगमनमा
चैत्र २६, विराटनगर । सिल प्याक पानीको जारभित्र लामखुट्टे फेला परेपछि विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले अनुगमन गरेकी छिन् । विराटनगर ५ स्थित जोनसन जल उद्योगले उत्पादन गर्ने गरेको धवन्तरी नीर पिउने पानीमा लामखुट्टे भेटिएपछि उक्त जारसहित अनुगमन टोली लिएर उपमेयर कार्की मंगलबार पानी उद्योग... जारी राख्नुहोस...
कोरोना संक्रमण रोक्न घरपालुवा जनावरलाई अनावश्यक नछुन सुझाव
चैत २६, काठमाडौं । मानिसबाट केही पशुमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको केही प्रमाण भेटिएपछि वैज्ञानिकहरूले लकडाउनका बेला आफ्ना बिराला घरभित्रै राख्न सुझाव दिएका छन् ।दुई घरपालुवा कुकुर, एक बिरालो र एक बाघमा समेत कोरोनाभाइरस सरेको पाइएपछि पशुचिकित्साविज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । हालै न्यूयोर्कको ब्रोङ्... जारी राख्नुहोस...
लकडाउन उल्लंघन गरे ५ सय जरिवाना
चैत २६, चितवन । चितवनको भरतपुर भित्रका टोल विकास संस्थाहरुले लकडाउनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कडा नियम बनाएका छन् । भरतपुर-७ स्थित उज्वल टोलले जथाभावी हिडडुल गर्ने, सवारी चलाउनेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएको छ । टोलका अध्यक्ष रामचन्द्र चालिसले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनल... जारी राख्नुहोस...
कोरोना महामारी सुरु भएको वुहानमा लकडाउन हटाइयो
चैत २६, काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भएको चीनको हुबे प्रान्तस्थित वुहान सहरमा लगाइएको लकडाउन हटाइएको छ ।स्मार्टफोनमा हुने व्यापक रुपमा प्रयोगमा आएको स्वास्थ्यसम्बन्धी एपमा "हरियो" कोड देखिएकाहरूले ज्यानुअरी २३ तारिखयता पहिलोपटक वुहान सहरबाट अन्यत्र जान पाउनेछन् । लकडाउन हटाइएसँग... जारी राख्नुहोस...
आज हनुमान जन्मोत्सव पर्व, हनुमानको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
चैत २६, काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने हनुमान जन्मोत्सव पर्व आज रामभक्त हनुमानको पूजा आराधना एवं पाठ पारायण गरी मनाइँदै छ । त्रेता युगमा पवन र अञ्जनीका पुत्रका रुपमा हनुमानको जन्म भएको थियो । रामायणमा वर्णन गरिएअनुसार रावणको अत्याचारबाट पृथ्वीलाई मुक्त गर्न श्रीरामभक्तका... जारी राख्नुहोस...
हिमामा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
टेलिकमको बोनस अवधि थपियो, लकडाउनसँगै बैशाख ४ गतेसम्म प्रयोग गर्न सकिने
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ५० लाख सहयोग
भायानेटमाथि साइबर हमला : १ लाख ७० हजार ग्राहकका व्यक्तिगत विवरण बाहिरिए
फेरी भरी सिलिण्डर ग्यास नै वितरण गरिने (विज्ञप्तिसहित)
कोरोना भाइरसबाट पैसालाई कसरी संक्रमणरहित बनाउने ?